Home Wararka Eedeynta Culus ee loo Jeediyey NISA iyo Xafiiska MW Ma Runbaa?
Eedeynta Culus ee loo Jeediyey NISA iyo Xafiiska MW Ma Runbaa?
Muqdisho Online waxay aaminsan tahay inaan suxufiyiinteennu mar waliba xaqa iyo waxa saxan u hiillinno ee aanaan ku hawlgalin caadifad oo aannaan ammaanin dowlad ama xukuumad faasid ah, isla markaana eedeyn dowlad ama koox dadaaleysa.
Waa dhab in 5tii sano ee tagtay lagu tacadiyey Saxaafadda oo la gaarsiiyey heer aysan sheegi Karin dhacdo xanuun leh oo ay indhahooda ku arkeen, caddeynna u hayaan. Dhinaca kale waxaa jiray wariyayaal sharuur ku nool ahaa oo loo shubi jiray, ahaana igu shubo aan kuu sheegee, taas ayaa iyadana sharafta iyo qiimaha ka qaadday saxaafadda xorta ah.
Suxufinimadu waa xirfad jaamacado looga soo baxo laakiin Somaliya waxay la mid tahay siyaasadda oo ay hoggaamiye kooxeed, munaafaq bulshada dhiigeeda iibasada iyo wadaad diinta ku qaraabta isugu yimideen.
Haddaba anagoo intaas maanka ku hayno aynu eegno eedeyn weyn oo uu dembi ka dhalan karo oo uu soo jeediyeye ruux careysan oo u muuqday inuu ku hadlayey magaca ururka suxufiyiinta. Eedeymaha uu soo waa kuwa dhabtii in si sax ah loo baaro lana weydiiyo inuu keeno caddeymahooda ama Villada ka bixiso cudur daar ay tahay.
Afhayeenka Suxufiyiinta oo ah ay hareeraha ka taagnaayeen rag ka tirsan uruka suxufiyiinta ayaa waxaa uu eedeyntiisa ku wajahay
Xafiiska madaxweynaha ee Villa Somaliya, qeybta warfaafinta.
Sidoo kale waxaa uu eedeyn kulul u jeediyey NISA oo uu sheegay inay tahay “hay’ad dadka qalata oo gacmaha iyo Lugaha dhiig ku leh”
Aynu ku hormarno eedeynta uu u jeediyey Xafiiska Madaxweynaha maalintii lagu dhawaaqayey RW Cusub Mudane Xamza Barre. Waxaa uu sheegay in looga yeeray warbaahinta xafiiska MW lana soo gudbiyey liskooda, kadibna ay tageen iyadoo shirkii jar’id ee magacaabista uu dhamaanayo.
Haddaba halkaas waxaa ka muuqata inay soo daaheen oo waqtigii loo qabtay ee 5ta galabniga ahaa sida laga helay qaar iyaga ka mid ah ay ka so dib dhaceen oo ay xataa qaarkood gaareen Madaxtooyada dalka 7dii fiidnimo.
Wargelintii ku aadaned RW Cusub waxaa la sii daayey waxaana loo sii daayey intii joogtay taas oo ah in warka ay saxaafaddu rabtay uu ahaa inay hesho warka magacaabista RW waana heleen.
Qolada amaanka ayaa u diiday suxufiyiinta markii ay soo daaheen, kana soo dib dhaceen waqtigooda waana hawl sax ah kol haddii ciidanka la siiyey waqti cayiman waa ku saxan yihiin inay fuliyaan oo eedda waxaa yeelaneysa cidda ka soo dib dhacday waqtigeeda ee ciidanka iyo Villada midkoodna ma lahaanayo.
Eedeynta loo jeediyey Xafiiska Warfaafinta Villada
Afhayeenka oo ay caro badan ka muuqatay ayaa sheegay inay dhaqanka caburinta saxaafadda ay horay ugu cowdeen isgoo sheegay in kooxo gaar ah la naasnuujin jiray oo astaamahooda horay loo sii geeyo iyo in Xafiiska Warbaahinta Madaxtooyada uu soo duubo muqaalladda shirarka jar’id madaxdana aan su’aalo weydiin Karin, taasina ay ku socotay sidaas 5tii sano ee tagtay laakiin hadda uu isbadal rajeynayo doorashadii kadib.
Waxaa uu sheegay inay rajeynayeen isbadal ma fahmin halka uu ka cabiray iyo waqtiga uu cabiray maadaama dhacdadanii ay tahay kuwii ugu horreeyey , hasa yeeshee waxaa uu sheegay inaysan waxba iska badalin:
Xaaladda Xuquuqda aadanaha- Ma ogi meesha uu ka soo geliyey eeddaan waayo qofna xuquuqdiisa laguma tuman.
Xaaladda Xuriyadda Saxaafadda iyo tan xuriyatul qawlka-Ma ogi Meesha uu ka soo geliyey haddii ay soo daaheen iyaga ciidankana waajibkooda ka guteen ma dhaawaceysaa xoruuyatul qawlka, Iyadoo uu marka uu hadlayo uu isticmaalayo xoriyatulqawl oo siduu rabo been iyo run ugu hadlayo, eedeyn uusan caddeyn u hayn u jeedinaya NISA iyo Villada.
Waayo ayuu yiri ’Dadka caqliga iyo Garshada Gaaban ee hadda jooga Xafiiska Warfaafinta Villa Somaliya darted” Hadalkan waa gef, waa caay , waa aflagaaddo, waa caddifad aad uga fog anshaxa saxaafadda, waana sababta aan ugu baahan nahay dad xirafadda saxaafadda yaqaanna oo aan caadifad iyo shakhsiyadeyneyn dhacdooyinka ay bulshada la wadaagayaan, isla markaana kaashanaya xaqiiqda la helaa. Suxufiyiinta ku dhacana la horgeeyo sharciga oo loo diro inuu iskuul tago soona qaato shahaaddo suxufinimoo markaas kadib loo fasaxo inuu hawshaas buslhada ka qaban karo si uusan bulshada u marin habaabin.
Marka arrimahan la eego xafiiska warfaafinta Madaxtooyada waxaa laga rabaa inay wanaajiyaan la dhaqanka suxufiyiinta iyo saxaafadda guud ahaan, laakiin lagula xisaabtamo gefafkooda oo aan loogu dulqaadan inay been shacbiga u gudbiyaan iyagoo ku gabbanaya xoriyatul qawl.
Haddaba Qofkan waa in loo yeeraa su’aalo kala cadeyn ah la weydiiyaa, ururkana laga dalbadaa inay ka noqdaan eedeyntooda, haddii kale madaxdtooyada ayaa laga rabaa inay cudurdaar ka bixiso haddii ay run yihiin eedeymaha afhayeenka. Khaladka waa inuu meel yeeshaa sii uusan u soo noqon.
Eedeynta NISA waa dembi weyn iyo suurad xumeyn hay’ad oo dhan oo ammaanka ninkaas eedeynaya inay ilaaliso laga rabo. Ururka uu ku hadlay magaciisa iyo isagaba waa inay su’aalo ka weydiisaa NISA iyadoon waxba loo dhimeyn xuquuqihiisa distuuriga ah. Waayo eedeyntiisu waa kuwa caddeymo u baahan waxana laga yaabaa inuu afhayeenka hayo cadeeymo muujinaya waxa uu ku sheegay NISA inay run yihiin.
Akhristow maxay kula tahay haddii uu qof waliba intuu qalabkeedii soo qaato uu yiraahdo waxaan qalayaa wadnaha ama kelliyaha, ama waxaan dhisayaa biyo-xireen biyaha qabta waan la yaabi lahayn oo waan diidi lahayn, laakiin siyaasi qofkasta oo suut iyo qoorxer (garafati) soo xerta ayaa noo ah, suxufi waxaa noo ah qofkii Mikarafoon, rikoor wax lagu duubo iyo kamera muuqaalka lagu qabto soo qaata, waana dhibaatada ugu weyn ee bulshadeenna haysataa.
Haddii uu jiri lahaa suxufi xirfadle ah wax badan oo naga khaldamaa waa laga hortagi kari lahaa oo suxufigaas ayaa dadka tusi lahaa ama wadaadka ama siyaasiga ayaa tilmaami lahaa.
"We were expecting a change similar to May 15 election, unfortunately, it seems nothing changed in the state of the human rights, freedom of expression & press freedom due to the ignorance of the people controlling Press Office of the President," @Cabdalleaxmed said. #Somalia. pic.twitter.com/Ei6bblwvbp
— GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) June 16, 2022
Previous articleThousands of Somalis at risk of starving to death, aid groups say
Next articleCiidamada Dowladda oo fashiliyey is-qarxin ay maleegtay Al-Shabaab
Dowladaha Chine & India oo dagaal ku dhaxmaray xuduuda